Hay’adaha xuquuqul insaanka oo dhaliilay beesha caalamka xilli taangiyada Suuriya ay galeen deegaano hor leh – SBC
Hay’adaha xuquuqul insaanka oo dhaliilay beesha caalamka xilli taangiyada Suuriya ay galeen deegaano hor leh
:-hay’adaha amnesty international iyo Human rights watch ee u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku dhaliilay beesha caalamka in aysan wax la taaban karo ka qaadin mas’uulyiinta dalka Syria.
Bayaan ka soo baxay xafiiska hay’adda human rights watch ayaa lagu sheegay in beesha caalamku iska indha tirayso waxa ka socda dalka Syria gaar ahaan deegaanada ay kamidka yihiin Darca , Xumus iyo Banyaas halkaasi oo ay ka socdaan kacdoon looga soo horjeedo maamulka madaxweyne Bashaar Al-asad.
Dhanka kale wararka ka imanaya magaalada Xumus ayaa sheegaya in dabaabadaha ciidanka Syria ay galeen magaaladaas islamarkaana laga maqlayo magaalada rasaas taas oo ay ku sheegeen in ay tahay tallabo cusub oo dowladda Suuriya ay ku dooneyso in ay ku kala dirto mucaaradka kasoo horjeeda xukuumadda Bishar Alasad.
Madaxweynaha Suuriya Bishar Al-asad ayaa la sheegay in ciidamo uu u diray magaalada Xumus oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Suuriya si ay usoo afjaraan rabshadaha bilowday ka hor 7 isbuuc ee xukuumadda Syria looga soo horjeedo.
Dadka dibada baxyada sameynaya ayaa tilmaamay in ay doonayaan xoriyad dhanka siyaasadda ah iyo in lasoo afjaro musuqmaasuqa.
Dhimashada ka dhalatay dibad baxyadaas ayaa ah 800 oo qof sida ay sheegtay hay´ad lagu magacaabo Sawaasiyah oo u dooda xuquuqda aadanaha oo ka dhisan Suuriya.
Dibad baxyada looga soo horjeedo Bishar Al-asad ayaa ka bilowday magaalada Darca 18-kii March balse jimcihii lasoo dhaafay ayay noqdeen kuwa ku baahay gobolo badan oo ka tirsan dalkaas.